Travel disruptions, cost cutting key issues for U.S. business in China -report | Myanmar Business Today
HomeBusinessTravel disruptions, cost cutting key issues for U.S. business in China -report
BEIJING, May 29 (Reuters) – Global travel disruptions are the top concern for American businesses in China, of which many are cutting compensation and bonuses amid the fallout of the COVID-19 epidemic, according toareport fromabusiness group.
Nearly 60% of surveyed companies said they had resumed normal operations after nationwide lockdowns, although onlyaquarter of companies working in the resources or industrial sectors said this was the case. About half of manufacturers said their facilities are operating at normal capacity. (Reporting by Gabriel Crossley. Editing by Gerry Doyle)
တရုတ်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန်လုပ်ငန်းများအတွက် အဓိက စိုးရိမ်စရာမှာ ခရီးသွားလာမှုများ ရပ်ဆိုင်း ပြတ်တောက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန်ကုန်သွယ်ကြီးများ၏ အစီရင်ခံစာအရသိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန်လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် လျော်ကြေးများ၊ အပိုဆုကြေးများ လျှော့ချနေကြသည်။
တစ်ရာလျှင် ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းသော စစ်တမ်းဖြေဆိုသူများမှာ ၎င်းတို့၏ ကုမ္ပဏီများမှာ အဆိုပါ ခရီးသွားလာမှု ရပ်ဆိုင်းခြင်းများကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့ရသည်ဟု ဖြေကြားခဲ့ကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လကမှု ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းကသာ ထိုကဲ့သို့ ဖြေကြားခဲ့ကြသည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော အကြီးတန်း စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိများမှာ တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပတွင် ပိတ်မိကာ ပြန်လာ၍ မရဘဲဖြစ်နေသည်။
“သူတို့ကို မြန်မြန် ပြန်လာလို့ရအောင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ အနီးကပ် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နေပါတယ်” ဟု အသင်း ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Greg Gilligan က ဆိုသည်။
ကုမ္ပဏီ ခြောက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကုန်ကျစရိတ်များ လျှော့ချနေကာ ထက်ဝက်ခန့်မှာ အလုပ်သမားများအတွက် နစ်နာကြေးကို လျှော့ချခြင်း၊ လျှော့ချရန်စဉ်းစားနေခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်ဟုဆိုသည်။ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ယခုနှစ်အတွက် လစာတိုးမည့် ကိစ္စများကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းများပြုလုပ်နေကြသည်ဟု ဆိုသည်။
အမေရိကန်စိးပွားရေးလုပ်ငန်း အသင်းအဖွဲ့များရော၊ ဥရောပ အသင်းအဖွဲ့များကပါ နိုင်ငံခြား အလုပ်သမားများ ပြန်လာခွင့်ပြုရန် တရုတ်အစိုးရကို စည်းရုံးဆောင်ရွက်နေကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ပြည်ပမှ ဝင်လာမည့် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူများကို ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအား ခြိမ်းခြောက်နေသည့်အရာအဖြစ် ရှုမြင်ထားသည်။
Previous articleMyanmar Passes the Industrial Zone Law
Next articleMAI loads cargo in passenger aircraft cabin enhancing transportation capacity